Ukuhambelana kweebhokhwe kunye nehagu: Ulwalamano oluhle - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Ukuhambelana kweebhokhwe kunye nehagu: Ulwalamano oluhle
Ukuhambelana kweebhokhwe kunye nehagu: Ulwalamano oluhle
Ibhokhwe kunye nehagu kwizodiac yaseTshayina banokuba ngabathandi abakhulu kuba bobabini baxhomekeke kwiimvakalelo zabo kuphela. Ngapha koko, ibhokhwe ifuna ukuthandwa ngalo lonke ixesha ukuze izive ilunge ngokwasemphefumlweni, kwaye ihagu ingakunika konke oku ngaphandle komzamo omkhulu.
Xa ikunye nehagu, ibhokhwe iya kuhlala ivulekile ngakumbi kuba amaqabane ayo ayanikezela kwaye axhasa ngokumangalisayo, singasathethi ke ngokuba bahlawula uthando lubaluleke kakhulu.
Iikhrayitheriya IsiDanga sokuhambelana kweebhokhwe kunye nehagu
Kunokuthiwa esona sibini siphumeleleyo kweli lizwe siyazi ukuba kukho ibhokhwe kunye nehagu. Ibhokhwe ekhululekile iya kuhlala iyithanda into yokuba ihagu inethamsanqa ngemali njengoko inokuqhubeka nobugcisa kwaye kwangaxeshanye izuze kwinkxaso yesithandwa sayo.
Ibhokhwe inomphefumlo ontununtunu kwaye ingayikhathalela kakuhle ihagu ubomi bayo bonke ukuze ibutofotofo kwaye ikhaya layo libutofotofo. Esi sisibini esiphatha igumbi labo lokulala njengetempile kuba bobabini bayakonwabela ukuchitha iintsuku nobusuku kule ndawo ikhuselekileyo necocekileyo.
Into yokuba ziyafana ngeendlela ezininzi zithetha ukuba banokuba nolwalamano olomeleleyo kakhulu apho bobabini bavunyelwe ukuba babe kwaye bazonwabile.
Njengokuba kunjalo, ihagu yenyama kunebhokhwe, kodwa bobabini bayakuthanda ukutya okumnandi, ukwenza uthando nokusela ezona wayini zintle. Ibhokhwe ingaqwalaselwa njengokuthanda izinto eziphathekayo kancinci kuba ayinangxaki yokuhlala kubunewunewu kuphela ngentelekelelo, kodwa xa isothandweni, abantu abakulo mqondiso bahlala benomdla kulonwabo.
Nokuba kwenzeka ntoni, ihagu iyakuhlala iyithanda into yokuba ibhokhwe iyile kwaye ikrelekrele, kwaye ngenye indlela, le yokugqibela iya kulithanda iqabane labo ngokuba nesisa, ukuzinza ngokwasemoyeni kunye nokuthembeka.
Aba babini banamathuba onke okuphela ngolonwabo olungapheliyo kuba akukho namnye kubo ekufuneka enze naluphi na uhlengahlengiso xa kufikwa kubuntu babo ukuze omnye abamkele kwaye bobabini bayakuthanda ukuchitha ixesha labo ekhaya.
Ihagu iyahlalisana kodwa ayizobugcisa njenge bhokhwe. Ngelixa abanye benokubona okokugqibela njengokuzikhuseleka kakhulu kunye nokuzilawula, ihagu iya kuhlala iyivuyela ibhokhwe ngokunyaniseka nobubele.
Ubudlelwane phakathi kwabo buya kuba bothando kwaye busondelelene kuba aba ngabantu ababini abathanda ukwenza esinye isiqingatha somntu obaluleke kakhulu emhlabeni.
Ngengulube, ibhokhwe inganguye okanye yona ngaphandle kokugxekwa ngokuba ingakanani na inika ukhuseleko. Kubalulekile ukuba le yokugqibela ingathethi ubuxoki obuninzi kuba eyokuqala inyanisekile kwaye ubudlelwane babo bunokutshatyalaliswa ngokulula ngenxa yokubaxa okanye into engeyonyani esele ithethiwe.
Ihagu ayisoyiki inyani kwaye inakho ukuphatha nantoni na. Xa kufikwa kwisini, aba babini bayahambelana kwaye bacinga ukuba ukwenza uthando yindlela yokubonisa ukuzibophelela kwabo.
Nangona kunjalo, ibhokhwe isenokungathembeki, kodwa ayingomthetho wegolide lo, ingakumbi ngehagu, nanjengoko iye izive iwonwabile.
Indoda ye-aquarius kubudlelwane
Aba babini bachitha ixesha elininzi kunye
Ihagu nebhokhwe zingafumana lula iindlela zokuzonwabisa kunye. Inyaniso yokuba bobabini banemvakalelo banokuba nabo kubudlelwane obufanayo ixesha elide kwaye bengaphikisani nangaluphi na uhlobo lweemvakalelo.
Oku kuthetha ukuba baya kuqondana kwaye ezinye izibini ezininzi ziya kubamonela. Njengabahlobo, aba babini banokubona apho iimoods zabo zivela khona kwaye akufuneki batshintshe into malunga nobuntu babo ukuze bamelane ixesha elide kakhulu kunye.
Ke ngoko, ngaphandle kobudlelwane babo, ibhokhwe kunye nehagu zihlala zinendawo efanayo kwaye ngesiqhelo akukho nenye ebeka uxinzelelo kwenye. Baya kuhlala beqinisekile ngothando lwabo kwaye bangaze bacinge ukuba omnye wabo unokukopa.
Ukuqukumbela, ubudlelwane phakathi kwehagu neebhokhwe imiqondiso yamaTshayina isebenza kuphela ukuba bobabini aba basebenzise eli thuba. Unxibelelwano lwabo luya kuba lolulungileyo, ke soze banikezele kwimiqobo endleleni yabo, ngakumbi ukuba kunye ixesha elide.
Into yokuba banoxolo lwengqondo xa bengabantu abatshatileyo kuthetha ukuba banokutshata kunye nabanye ubomi babo bonke. Nangona kunjalo, kufuneka banike ingqalelo kutyekelo lwabo lokubaleka inyani xa iingxaki ziqala ukubonakala.
Ihagu ayisoze ifune ukuba ngoyena odala ukungavisisani kubudlelwane babo, kwaye ibhokhwe isenokuziva injalo ngokufanayo. Oku kuthetha ukuba ukuvisisana kuya kubakho kakhulu umanyano lwabo, ke abayi kulwa ngezinto ezingenamsebenzi kwaye bakhethe ukuvumela uthando lulawule ubomi babo kunye.
Yomibini le miqondiso yeyokwenyama kwaye bayakuthanda ukuchitha ixesha elininzi ebhedini omnye komnye. Okukhona beya kuba kunye, kokukhona baya kuqonda ukuba ngokwenene banobomi obumnandi njengesibini kwaye banokufunda izinto ezininzi omnye komnye.
Ihagu ayizukukhathazeka ukomelela njengoko ibhokhwe yaziwa ngokusoloko ifuna inkxaso. Nangona kunjalo, eyangaphambili inokubuyisa ubomi obutofotofo kunye nokuninzi kokuthoba.
Inyaniso yokuba baziva ngokweemvakalelo ayinakuchaphazela kakubi ukulingana phakathi kwabo nangayiphi na indlela. Ukuba indoda yihagu kwaye umfazi uyiBhokhwe, baya kuhlala ixesha elide kakhulu kunye, kunokwenzeka de kube sekufeni kwabo.
Bobabini aba bantu banemiphefumlo ethe tye kunye nomfanekiso-ngqondweni olungileyo, ke ngekhe bakuthethe ukuthetha ngethemba labo nangamaphupha abo xa belele. Aba babini banokuthandana kakhulu, kwaye akasokuze amsebenzise, ​​nokuba uyayifezekisa yonke iminqweno yakhe.
Xa indoda iyiBhokhwe kwaye umfazi eyiHagu, aba babini banokonwaba kakhulu futhi kuba abakhathali nokungafani kwabo. Kungakhathaliseki ukuba yintoni ebangele ukuba bahlale bebuhlungu, uya kuhlala enetyala.
Unesimilo esihle kwaye uyayazi indlela yokusombulula ukungavisisani, ngelixa bobabini banako ukwenza izinto zibengcono emva kwexesha apho kungakhange kubekho nto ihambe kakuhle. Esi sisibini esonwabileyo apho amaqabane athambekele ekuxolelaneni nangantoni na.
Nokuba iyafana kakhulu kwaye iyathandana ngokumangalisayo, ibhokhwe kunye nehagu inokuba nazo iingxaki, njengaso nasiphi na esinye isibini. Umzekelo, omnye wale micimbi unokuba nenyani yokuba ibhokhwe iyazikhusela kwaye iyaligqiba iqabane layo ngothando.
Ke ngoko, ihagu inokugqibela ngathi iyaziva ibotshiwe xa ikunye nomntu okulo mqondiso. Iihagu zihlala zingakhathazeki xa ziziva zithandwa kodwa ingqwalaselo yebhokhwe isenokuba nzima kakhulu kuzo.
Ngapha koko, kwa aba bantu bemveli banokuba neenkani kakhulu kwaye abafuni kuguqula iindlela zabo, nokuba imeko ithatha luphi ulwalathiso kwaye bubuphi ubomi obuphosayo.
Akunakwenzeka ukuba uqinisekise ihagu ukuba itshintshe ingqondo yayo ngento ethile, enokuthi ikhathaze ibhokhwe kakhulu kwaye ibangele ukuba umntu okulo mqondiso azive ngathi uyatyhalwa.
Ngaphandle kwayo yonke le nto, ukuba ibhokhwe kunye nehagu zikwimeko apho izinto eziphambili ngokubaluleka kunye nomdla wabo zingangqinelani, akukho namnye kubo oya kunikezela okanye alungele enye, ukuze ubudlelwane babo buphele kwakamsinya.
Omnye umba onzima abanokuthi bajongane nawo uhambe kunye unento yokwenza nokuba bobabini bazithobile kwaye banemvakalelo.
Akukho namnye kwaba babini okhe asebenzise ingqiqo, oko kuthetha ukuba abanakho ukwenza izigqibo ezifanelekileyo kwaye banokugqibela ngokwenzakalisana ngokunzulu xa besilwa.
Ngaphezulu koku, kwakamsinya nje ukuba babe nengxaki, bathambekele ekuyijika ibe yintlekele. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, ibhokhwe inokuyiminxa ihagu ngothando oluninzi kwaye emva kokubuyisa isithukuthezi, qala ukucinga ukuba ubudlelwane bayo bufanelekile na.
Ibhokhwe nehagu nazo zinokuzixakekisa kangangokuba aziqapheli ukuba zingaphi iingxaki zomanyano lwazo. Ngapha koko, akukho namnye kubo olungileyo ngemali, ke ingxaki yemali iqhelekile kubo xa betshatile.
Zombini ezi ndawo azisebenzi kwaye ziyakuthanda ukuchitha imali eninzi, ngaphandle kokucinga ngokutyala imali, singasathethi ke ngokuba zithanda ezona zinto zibiza kakhulu kwaye zihlala kubunewunewu. Kucetyiswa ukuba baqeshe i-accountant kuba kuphela ngale ndlela, banokonwabela intuthuzelo yobomi obulungileyo.
IGemini Ilanga iLibra inyanga: Ubuntu obunemfesane
Umntu oLumkileyo weVirgo-Libra Cusp Man: Iimpawu zakhe eziveziweyo
Ukuziphatha kwendoda gemini ukuthandana nomntu wasemanzini
uyenza njani indoda ye-libra ikufune ubuye
indoda eneemars kwiscorpio
EyoMqungu 23 juniac uphawu lokuhambelana